क्यूआर कोड भुक्तानीमा वाणिज्य बैंक आक्रमकः गर्भनर अधिकारीलाई भ्याई नभ्याई ? - Aathikbazarnews.com क्यूआर कोड भुक्तानीमा वाणिज्य बैंक आक्रमकः गर्भनर अधिकारीलाई भ्याई नभ्याई ? -
adhd homework help for parents columbia university creative writing graduate program brainfuse homework help online cpm algebra2homework help creative writing on earth ewu creative writing mfa creative writing similes and metaphors creative writing tutor singapore creative writing on life inabig city how to help your child with homework best websites for essay writing scientific research paper writing service engineering thesis writing services how do you do your homework fast can i hire someone to write my college essay doing homework drawing manchester met english and creative writing someone writeathesis statement write my nursing research paper homework help jobs near me thesis helper malaysia nova southeastern university creative writing tujuan creative writing adalah resume writing service brisbane apa format for creative writing rubric for written research paper tg creative writing charity creative writing cheap writing service reviews writing college admission essay
नेपालका २७ वाणिज्य बैंकहरु पछिल्लो समय कर्जा लगानी गर्न भन्दा बढि समय क्यू आर कोडबाट भुक्तानी गर्ने काममा लागि परेका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
देश भरीका तरकारी पसलमा क्यूआर कोड प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न २७ वाणिज्य बैंकहरुले गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीकै प्रमुख अतित्थ्यतामा उद्घाटन गरि शुरुवात गर्न होडवाजी चलाएका छन् भन्दा फरक पर्दैन । प्रायः सबै वाणिज्य बैंकहरुले क्यू आर कोड भुक्तानी प्रणालीको शुरु गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै दिए पछि वाणिज्य बैंकहरुले यो सेवालाई आक्रमक रुपमा अगाडी बढाएको देखिन्छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कहिले मन्दिरको भेटी क्युआर कोडबाट भुक्तानी गरेको फोटो सार्वजनिक गरेका छन्, भने कहिले टेम्पो भाडा पनि त्यसैगरी तिरिरहेको देखिन्छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
गभर्नर अधिकारीले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षा गर्दै क्युआर कोड लगायतका विद्युतीय कारोबार प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे । यसबाहेक विद्युतीय कारोबार प्रवर्द्धनका लागि वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चहरुलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
करिब डेढ महिनाअघि निजी क्षेत्रले तयार पारेको पुर्वाधारलाई गभर्नरले उपयोग गर्न बैंकहरुलाई हौस्याइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको अग्रसरतामा वाणिज्य बैंकहरुले राजधानीका ठूला तरकारी तथा फलफूल बजारबाट क्यूआर कोड भुक्तानी संचालनमा ल्याएको देखिन्छ ।
गत पुस १० मा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले नक्साल तरकारी तथा फलफूल बजार पुगेर क्यूआर कोडबाट भुक्तानी सेवा शुभारम्भ गरेका थिए । यसअघि पनि विभिन्न किसिमका खुद्रा व्यापार आउटलेटहरुका साथै होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुले पनि फाट्टफुट रूपमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी सुविधा संचालनमा नल्याएका होइनन् । तर राज्यस्तरकै सक्रियतामा खुद्रा बजारमा सामुहिक रूपमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी सेवा कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो नै पहिलो घटना हो ।
तरकारी बजारहरुमा नगद कारोबारलाई न्यून गर्दै विद्युतीय भुक्तानी विस्तारमा फोनपे र सानिमा बैंकको सहकार्यमा क्यूआर कोड भुक्तानी सुरु भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको केन्द्रिय कार्यालय र शाखानजिक रहेका तरकारी तथा फलफूल बजारमा क्यूआर कोड भुक्तानी सेवा राख्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएसँगै यसले व्यापकता पाउँदै गएको छ । त्यसैको परिणामस्वरुप पछिल्ला केही हप्तायता राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि बैंकका उच्च तहका कर्मचारीहरु समेतको उपस्थितिमा तरकारी तथा फलफूल बजारहरुमा क्यूआर कोड भुक्तानीको थालनी गरेको भेटिएको छ ।
त्यही सिलसिलामा नक्सालपछि गत पुस २४ मा प्रभु बैंकले कालिमाटी तरकारी बजारमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी सेवा सुरु गर्यो । माघ १६ मा नबिल बैंकले काठमाडौंको कुलेश्वर फलफूल बजार र एनएमबी बैंकले बल्खु तरकारी बजारमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी सेवा थाल्यो । माघ २१ मा माछापुच्छ्रे बैंकले पनि राजधानीको तीनकुने तरकारी बजारमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी सेवा सुरु गरेको थियो । भन्दा फरक पर्दैन ।
यी सबै तरकारी बजारमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानीको उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी उपस्थित मात्र भएनन्, व्यापारी र उपभोक्ता दुवैलाई यसतर्फ प्रोत्साहित गर्न उनले प्रत्येकपटक उद्घाटनमा जाँदा तरकारी तथा फलफूल खरिद गरेर क्यूआर कोडबाट त्यसको भुक्तानी गरेका छन् । तरकारी बजारभित्रको चिया पसलमा चिया खाएपछि त्यसको भुक्तानी समेत गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले क्यूआर स्क्यान गरेरै गरे ।
भर्खर मात्रै क्यूआर कोड सेवा सुरु भएकाले आगामी दिनमा यसको प्रयोग बढ्दै जाने तरकारी तथा फलफूल बजार सञ्चालकहरुले पंक्तिकारलाई बताए । यसका लागि बजारमा रहेका सबै व्यापारीहरुले क्यूआर कोड राख्ने वातावरण सरोकार संस्थाहरुले बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
कालिमाटी तरकारी बजारमा क्यूआर कोडबाट पनि भुक्तानी गर्न मिल्ने देखेर भोलिका दिनमा यो अन्यत्र पनि विस्तार तथा प्रभावकारी बन्दै जाने देखिन्छ ।
काठमाडौंभित्रका तरकारी तथा फलफूल बजारबाट सुरु भएको क्यूआर कोड अभियानलाई राष्ट्र बैंकले उपत्यकाबाहिर पनि विस्तार गर्न थालेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
विद्युतीय भुक्तानीको सबैभन्दा सहज र सुलभ क्यूआर कोडलाई देशव्यापी अभियानकै रुपमा लैजाने सोच गभर्नर अधिकारीको रहेको देखिन्छ । सोहीअनुरुप राष्ट्र बैंकको ध्यान उपत्यकासँगसँगै यतिबेला मोफसलमा पनि केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ ।
मोफसलमा भने खुद्रा व्यापारभन्दा बाहिर गएर राष्ट्र बैंकले क्यूआर अभियान थालेको छ । सोही क्रममा गभर्नर अधिकारीले माघ ३० गते सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा सञ्चालित तीनपाङ्ग्रे सवारी (टेम्पो)मा क्यूआर कोडबाटै भुक्तानी लिनरदिन सकिने सेवाको उद्घाटन गरेको देखिन्छ । सिभिल बैंक लिमिटेडले फोन पेसँगको सहकार्यमा टेम्पोहरुमा क्यूआर कोड सेवा थालेसँगै त्यहाँका टेम्पु चढ्ने यात्रुहरुले अब फोनपेको क्यूआर कोडबाट भाडा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । सार्वजनिक यातायातमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी सेवालाई व्यापक बनाउने सोच राष्ट्र बैंकको देखिन्छ ।
सोही अनुरुप केही दिनअघि काठमाडौंमा सञ्चालित सफा टेम्पो र गोपीकृष्ण(बालकुमारी रुटमा चल्ने नेपाल यातायातमा पनि क्यूआर कोडबाट भुक्तानी सुरु गरिएको थियो । योसँगै खुद्रा व्यापारिक बजारमा मात्र नभएर सार्वजनिक यातायात सेवा पनि ’क्यासलेस’ तर्फ अघि बढेको देखिन्छ ।
मन्दिरको भेटीसमेत क्युआर कोडबाटै
क्यूआर कोडबाट विद्युतीय भुक्तानीको अभ्यास नेपालमा भर्खर बामे सर्दै गरेको भए पनि तरकारी बजार र सार्वजनिक यातायातमा मात्र नभएर यो मन्दिरसम्म पुगिसकेको छ । सिभिल बैंक र फोनपेको सहकार्यमा सिन्धुलीको कालीमाई मन्दिरमा भेटी पनि क्यूआर कोडबाटै भुक्तानी गर्न सकिने बनाइएको छ । यसको उद्घाटन समेत गभर्नर अधिकारीले नै गरेको देखिन्छ ।
क्यूआर कोडबाट भुक्तानीको प्रभावकारितामा अहिले विशेषगरी यसको प्राविधिक पूर्वाधार र सेवा सुरु गर्न मर्चेन्ट (व्यापारी) लाई असहज प्रक्रिया तथा प्रावधान बाधक देखिएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
ग्राहकले क्युआरबाट भुक्तानी गर्नका लागि व्यापारीले यो सेवा लिएको हुनुपर्छ । तर अहिले यो सेवा लिन व्यापारीका लागि प्रक्रिया सहज छैन । यसकारण क्यूआरबाट विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गरेर नगदरहित कारोबारलाई नगदरहित बनाउने अभियानमा अघि बढ्दै गर्दा साना(साना व्यापारीले पनि यो सेवा सजिलै लिनेगरि प्रक्रिया सरल र सहज बनाउन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
क्यूआर कोडमार्फत विद्युतीय भुक्तानीका लागि इन्टरनेट अनिवार्य हुन्छ । यसैले मोबाइल डाटा खर्च गरेर विद्युतीय भुक्तानीमैत्री भइनसकेका उपभोक्ताले क्यूआर कोडबाट खरिददारी गर्न जाँगर नदेखाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । गर्भनर साब ?
औपचारिक रूपमा खुद्रा बजारमा क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानीको थालनी भएको राजधानीको नक्साल तरकारी बजारको अनुभवले पनि यो देखाएको छ । उपभोक्ता तथा तरकारी(फलफूलका खुद्रा व्यापारीलाई विद्युतीय भुक्तानीमा बानी बसाल्न सकियोस् भन्नका लागि निजीक्षेत्रको इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायनेटले नक्साल तरकारी बजारमा निःशुल्क वाइफाइ जडान गरिदिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
क्यूआर कोड विस्तारले बैंकहरुको खर्च घट्नेदेखि पैसा छपाइका लागि विदेशिने रकम समेत जोगिन्छ । पीओएस मेसिन वा एटीएम बुथभन्दा क्यूआर कोडको प्रयोग सस्तो हुने बैंकरहरुको दाबी छ ।
ग्राहकले पनि नगद वा विद्युतीय कारोबारकै लागि पनि डेबिटरक्रेडिट कार्ड बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । मात्र मोबाइल बोकेर हिँड्दा वस्तु किनमेल वा अन्य सेवाको भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यसले नगद हराउने वा चोरी हुने जोखिम समेत हटेर जाने बैंकरहरुको दाबी छ ।
महालक्ष्मी लाइफका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्माले लिए सपथ
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा दृष्टिबिहिनहरु छडी वितरण
एसबिआई बैंकले घोषणा गर्यो २६औं वार्षिक साधारणसभा
सिभिल बैंकले बचत खातामा वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदर दिने
स्वदेशमा एक लाख २० हजारसम्म आम्दानी